RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Xidigii Real Madrid Ee Mateo Kovacic Oo Qayb Ka Ahaa Heshiiskii Courtois Ugu Biiray Madrid. - GOOL24.NET
RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Xidigii Real Madrid Ee Mateo Kovacic Oo Qayb Ka Ahaa Heshiiskii Courtois Ugu Biiray Madrid.
Kooxda Chelsea ayaa ku dhawaaqday in ay hadda dhamaystirtay heshiiska xidigii khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Mateo Kovacic. Chelsea ayaa xalayba sii shaacisay in Mateo Kovacic uu qaybka ahaa heshiiski uu Courtois ugu biiray Real Madrid kadib markii uu xidiga ree Croatia iska diiday in uu wax tababar ah la sameeyo kooxda Lulen Lopeteigui.
Laakiin heshiiska Mateo Kovacic ee Chelsea ayaa ah mid amaah oo aanu ku jirin qodob sheegaya in ay heshiiska amaahda ah u badali karto mid rasmi ah laakiin Mateo Kovacic ayaa muhiimada kowaad ka dhigtay in uu ka baxo Madrid isla markaana uu raadsado koox uu waqti badan ka ciyaari karo.
Mateo Kovacic oo Inter Milan kaga soo biiray kooxda uu hadda ka soo baxay ee Real Madrid ayaa tan iyo waqtigii Rafa Benitez ku dhibtoonayay in uu boos joogto ha ka helo shaxda Real Madrid laakiin markii uu koobka aduuka ka soo laabtay waxa uu la yimid qorshe cad oo ahaa in uu ka baxo Madrid.
Mateo Kovacic ayaa si toos ah ugu sheegay Julen Lopetegui in aanu kooxda sii joogayn laakiin Real Madrid ayaa fursadan uga faa’iidaysatay in ay Chelsea ugula xaajooto goolhaye Courtois waxayna Blues siisay fursada uu Mateo Kovacic kooxdeeda ugu biirayo amaah kaas oo hadda la dhamaystiray.
War saxaafadeed Chelsea ka soo baxay oo lagu shaaciyay heshiiska Mateo Kovacic ayaa lagu yidhi: ” Mateo Kovacic waxa uu heshiis amaah ah Real Madrid kaga soo biiray Blues”. 24 sano jirkan ayaa qayb ka noqon doona qorshaha macalin Sarri ee xili ciyaareedka cusub isaga oo u dagaalami doona in uu daqiiqado badan ka ciyaaro Blues.
Mateo Kovacic ayaa isku dayi doona in uu Chelsea ku qanciyo in heshiiskiisa amaahda ah ay ka dhigto mid rasmi ah isaga oo aan doonayn in uu dib ugu laabto Real Madrid kadib markii uu qirtay in aanu Madrid fursad ku helayn.
Kovavic ayaa dareenkiisa farxadeed ka hadlaya ayaa yidhi: ” Xaqiiqdii waan ku faraxsanahay in aan halkan joogo Chelsea. Waa dareen layaableh. Waxayga ugu fiican ayaan iskugu dayi doonaa kooxdan, waa horyaal aniga igu cusub, markasta bilawgu waa wax adag, laakiin waxaan hubaa in tababaraha iyo ciyaartoyda cusub ee aanu isku kooxda nahay ay i caawin doonaan, isla markaana xili ciyaareed fiican ayaan wanaag ka rrajaynayaa”.